———၊ ဇွန် ၊——— ညဉ့်လယ်လောက်မှာ သင့်ကလေးငယ်ဟာ အိပ်မက်ဆိုးကြောင့် ကြောက်လန့်တကြား လန့်နိုးလာပြီး ငိုကြွေးနေပါသလား။ ဒါဟာ အိမ်တွင်းစိတ်ခံစားမှု ထိခိုက်ဖွယ်ရာ အခြေအနေ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းနေကလေးဆိုရင် ကျောင်းမှာ စိတ်ထိခိုက်စရာ အတွေ့အကြုံတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အိပ်စက်မှုဖောင်ဒေးရှင်း (NSF)...
ဘယ်အရွယ်မှာ အပျိုဖော်ဝင်တတ်ပါသလဲ …
—–၊ ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မသမီးက အခု အသက် ၁၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ရာသီမလာသေးလို့ပါ။ မိန်းကလေးတွေက ဘယ်အရွယ်မှာ အပျိုဖော်ဝင်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အပျိုစဖြစ်တဲ့အရွယ်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက်...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဦးခေါင်းကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာက စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးရင် ပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့မရပါဘူး။ ဦးခေါင်းကို မတော်တဆထိခိုက်မိသွားလို့ ဦးခေါင်းအပြင်မှာ ပွန်းရာလေးတောင် မရှိဘဲနဲ့တောင်မှ အတွင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ ဒဏ်ရာရနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းကို ထိခိုက်မိပြီဆိုတာနဲ့ သတိထားဖို့...
လမစေ့ ကလေးမွေးဖွားခြင်းမဖြစ်စေမည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အလေ့အထများ
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ အပျော်ရွှင်ရဆုံး အခိုက်အတန့်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ခံစားရတာနဲ့အတူ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးဖွားတာမျိုး မဖြစ်အောင် ရှောင်လွှဲနိုင်မှာပါ။...
သွေးတိုးတိုင်း စိုးရိမ်ရလား . . .
—–၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. သွေးတိုးရင် စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ A. သွေးတိုးတိုင်း စိုးရိမ်ရလားဆိုတာမျိုး လူနာတွေက မကြာခဏ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ သွေးတိုးတာနဲ့အတူ အသက်ရှူမ၀တာ၊ မောတာ၊ နှလုံးထိခိုက်တာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊ သတိလစ်တာ၊...
———၊ လရိပ်မေ ၊——— လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်၊ ဗီတာမင်အီးနဲ့ တခြားအာဟာရဓာတ်တွေက သင့်အရေပြားကို ကာကွယ်ပေးပြီး သဘာဝကျကျ ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။ အရေပြားက ချောမွတ်နေပြီးသားဆိုရင် သဘာဝကျကျ တောက်ပမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည် လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်မှာ ပိုလီဖီနောဆိုတဲ့ အစွမ်းထက်အင်တီအောက်ဆီးဒင့်...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– အရေးပေါ်လူနာကို ကြည့်ရှုဖို့ တာဝန်ကျနေတဲ့ တစ်ညမှာ အိမ်လိုင်းဖုန်းခေါ်သံကြားရပါတယ်။ “ ကျွန်တော်အရေးပေါ် ပြင်ပလူနာဌာနက လက်ထောက်ဆရာဝန်စိုင်မွန်ပါ ဒေါက်တာအုန်း။ လူနာတစ်ယောက်ကိစ္စ တိုင်ပင်ချင်လို့ပါ” “ ရပါတယ်။ လူနာအခြေအနေက . ....
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင့်အနေနဲ့ ဘယ်အပိုင်းမှာ ပိုမိုကျွမ်းကျင်မှု ရှိလိုသလဲ။ ဘာသာစကားလား၊ လူမှုဆက်ဆံရေးလား။ ဒီလို ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် ခြောက်မျိုးမှာ သင်ပိုပြီး တိုးတက်ချင်တဲ့အပိုင်းကို ပိုအားထည့်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု ပါဝင်သော ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်း...